adCenter ee Adsense ... tani caadi ma noqon karto | Martech Zone
adCenter ee Adsense… tani caadi ma noqon karto
Arbacada, December 13, 2006 Monday, August 24, 2009 Douglas Karr
Waxaan hayaa wax wanaagsan oo quruxsan oo socda Xisaabiyaha Lacagta. Boggu wuxuu leeyahay booqashooyin hoose, laakiin xayeysiiyaal sare CTR leh Google Adsense. Ma ahan wax aan ka fariisan lahaa laakiin goobta ayaa leh faaiido faa'iido leh oo ka badan 200% sii jirtey. (Had iyo jeer waxay iga dhigtay inaan isweydiiyo bal inaan si fudud uga shaqeeyo dhismaha kun qalab dheeraad ah oo bilaash ah oo internetka ah Adsense… taasi waxay noqon kartaa dakhli nadiif ah!)
Shalay, waxaan u saxiixay heshiis Microsoft adCenter waxaana la yimid $ 200 qiimihiisu yahay xayeysiin bilaash ah. Waxaan ka aqriyay su'aalaha la isweydiiyo iyo Shuruudaha Isticmaalka mana aysan qorin, si kasta ha noqotee, inay sharci darro tahay in la isticmaalo xayeysiintaas si loogu kaxeeyo taraafikada degel kale, halkaasoo Google Adsense lagu rakibay.
Marka taasi waa waxa aan sameeyay. Waan saxeexay, waxaan dejiyey miisaaniyad dhan $ 200 waxaanan u sheegay inay socoto illaa inta laga dhammaynayo. Taasi $ 200 waxay heli doontaa Calculator Payraise oo ku qoran natiijooyinka raadinta lacag bixinta ee booska # 1 ee 4 keywords aan xushay. Dadkaas waxaa loo kaxeyn doonaa Calculator Payraise halkaasoo ay kula kulmi doonaan xiriiro dheeraad ah oo Adsense ah. Aniga oo adeegsanaya celcelis ahaan CTR, waxaan sameyn doonaa inta u dhexeysa $ 10 iyo $ 20.
Qof baa lacagtaas bixiyay! Ma aaminsani in aan sameeyay wax loo arko in aysan ku habooneyn xayeysiiyaha, laakiin waxaan dareemayaa wax yar oo wasakh ah. Waxaan arkay farsamadan ay adeegsadayaashu isu adeegsadaan xoogaa. Waxay ku xiraan khadadka isku xidhka ah ee ay wax yar ku bixiyaan si ay kuugu geyso goobaha ay Xayeysiiyayaasha ansaxa ahi ku leeyihiin CTR aad uga sarreeya. Marka xisaabta ayaa shaqeyneysa haddii ay ku sii wadi karaan CTR wanaagsan oo ku filan xayaysiisyada. Isku soo wada duuboo inta badan waxay ku jiraan lacagta oo keliya, in kastoo. Bogagga sida caadiga ah ma laha wax tayo leh oo tayo leh. Taa bedelkeeda, Payraise Calculator waa goob sax ah oo leh labada nuxur iyo qalab loogu talagalay booqdayaasha inay adeegsadaan.
Ma khalad baa? Mise waxay la mid tahay haddii aan si fudud ganacsi uun uga helay $ 200?
Fiiro gaar ah: Waxaan tan u sameeyay tijaabo ahaan si aan isbarbar dhigo heerka jawaabaha iyo inaan tijaabiyo nidaamka. Hadday tani runti tahay mid aan habboonayn - fadlan ii soo sheeg.
Bloggin 'Ma Fududa! Xitaa Vox
25, 2006 at 7: 39 PM
IMHO, tan iyo, "Calculator Payraise waa goob sax ah oo leh nuxur labadaba iyo qalab loogu talagalay booqdayaasha inay adeegsadaan…", waxa kaliya ee aad sameyneysaa waa anshax ahaan in lagu taageero garqaad. Haddii uusan jirin sharci gaar ah oo ka soo horjeeda, mar kale samee. Ka dib oo dhan, waxaad ka hadlaysaa Saamayn iyo otomaatig.
25, 2006 at 9: 06 PM
Mahadsanid, Vince! Wadarta qaadashadu waxay ahayd $ 50.